ISaudi Arabia iTyalela imali kwikamva ngoku kunye ne-100+ yamanyathelo eNkcubeko
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula » ISaudi Arabia iTyalela imali kwikamva ngoku kunye ne-100+ yamanyathelo eNkcubeko
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
ISaudi Arabia kwiFII
Kwi-Institute Investment Initiative (FII) e-Riyadh namhlanje, iSekela likaMphathiswa weNkcubeko, uMhlonishwa u-Hamed bin Mohammed Fayez, wagxininisa uluhlu oluchukumisayo lwamanyathelo enkcubeko ye-100, iindibano kunye neziganeko ezenzeka eBukumkanini ngaphambi kokuphela konyaka.
Ishedyuli ephilileyo kunye neyohlukeneyo ibandakanya iziganeko ezininzi ezikhokelwa ngamaziko enkcubeko angama-25 uMphathiswa weNkcubeko uye wasungula ukususela kwiminyaka eyi-3 eyadlulayo.
U-HE Fayez uthe inkcubeko yaseSaudi ityhilwa kwaye inikwe amandla kwinqanaba elingazange libonwe ngaphambili kunye nesantya.
Amabhongo oBukumkani avula amathuba amaninzi kwicandelo labucala lasekhaya nelamazwe ngamazwe.
“Eli lixesha elimnandi lenkcubeko eSaudi Arabia. Kwezi veki zizayo zizodwa, siza kubamba umnyhadala wethu wokuqala wefilimu wamazwe ngamazwe, i-art biennale yethu yokuqala kunye neminyhadala yamazwe ngamazwe efana neFashion Futures kunye ne-MDLBeast,” utshilo u-HE Fayez. iFII. "Ezi ziganeko ziphuma kwinkqubela phambili eqhubekayo yoBukumkani ukukhulisa ubuchule kunye nokudala uqoqosho lwenkcubeko ephilileyo eBukumkanini." ISaudi Arabia sele inegalelo elibonakalayo kushishino lwehlabathi lokudala.
Kwezinye iimpawu zenkqubela phambili ekhawulezileyo kunye namabhongo amatsha, i-Ofisi yoMphathiswa iphuhlise isicwangciso esiza kuvula amathuba amatsha otyalo-mali ngokwenkcubeko ngee-PPP okanye amaphulo adibeneyo, ukuqinisa iziseko ezingundoqo kumashishini oyilo, kunye nokulawula lula ukuvumela amashishini ukuba aphumelele. Kudityaniswa nemfuno ekhulayo yenkcubeko kulo lonke uBukumkani, utshintsho Indawo yenkcubeko yaseSaudie sele ibambe iliso labatyali-zimali bamazwe ngamazwe.
U-HE Fayez wakhawuleza ukubonisa ukuba indima yoBulungiseleli ayizange iphelele ekukhuthazeni amashishini okudala ngaphakathi koBukumkani kodwa nokwandisa nokuphucula umgangatho wokutshintshiselana kwenkcubeko kunye noontanga bayo behlabathi.
"Ndiyazingca kakhulu ngoBukumkani obukhankasela ngempumelelo inkcubeko kunye namashishini oyilo ukuba abe yinxalenye yencoko ye-G20," utshilo u-HE Fayez ngexesha lengxoxo yakhe. "Iqale ngexesha likamongameli waseSaudi kulo nyaka uphelileyo kwaye iqhubekile, okuthetha ukuba siqinisekisile ukuba inkcubeko inendawo esisigxina kwiingqwalasela ze-G20 kwaye iyinxalenye ye-ajenda yezoqoqosho lwehlabathi."